Puerto Rico: Fihaonan’ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2010 15:42 GMT
Nandray anjara tamin'ny fihaonana faharoan'ireo mpitoraka blaogy natao omaly tany Caguas, Puerto Rico, ireo mpitoraka blaogy, mpanao gazety, mpandraharaha, ary ireo mafana fo. Niresaka momba ny fampiasana ny blaogy ho toy ny fitaovana fampidiram-bola ireo mpandray anjara, ny toeran'ireo vehivavy ao anaty ny tontolon'ny blaogy, ny fitorahana blaogy mikasika ny hafanam-po ara-tsosialy, ny moblogging, ny tontolon'ny blaogy any Karaiba , ary ny rindrambaiko misokatra.
Sary famantarana ny fihaonana faharoan'ireo mpitoraka blaogy tany Puerto Rico.
Amin'ny anaran'ny Global Voices, dia nanadihady ny mpikarakara, José Hernández Falcón, mpanao gazety any Puerto Rico izay niresaka mikasika ireo blaogy sy ny aterineto tamin'ny 1995 aho. Milaza ny tenany ho “mpanao gazety tia ny teknolijia sosialy izy.” Mitoraka blaogy mikasika ny teknolojia izy ao amin'ny Chatmanía 2.0 [ES] izay miantrano ao amin'ny gazety mahazatra Primera Hora.
Ahoana ny nihavian'ny hevitra hanao ny fihaonan'ireo mpitoraka blaogy tany Puerto Rico?
Efa taona lasa izay no nitsirian'ity hevitra ity, tamin'izaho mbola lehiben'ny tranonkalan'ny zonai (an'ny gazety mahazatra El Nuevo Día). Nanohana fikambanana lehibe iray teo anivon'ny aterineto tany Puerto Rico ity tranonkala ity. Nanararaotra izay tanjaka izay aho hikarakarako fihaonana miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra, izay tsy mbola nisy mihitsy. Niha-nivoatra ity hevitra ity niaraka tamin'ny firongatry ny blaogy, ary, farany, tamin'ny taona 2009, tanteraka ny nofiko. Noararaotiko ny fifandraisana nananako tamin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety sy ny tanànan'i Caguas (tanàna midadasika akaikin'ny renivohitra, San Juan) – izay iasako amin'izao fotoana – mba hitadiavana fanohanana ara-bola hikarakarana fihaonana miaraka amin'ireo mpitoraka blaogy tena misongadina any Puerto Rico.
Nanao ahoana ny fihaonana voalohany tamin'ny 2009?
Ny fihaonana voalohany dia natao ho fivoarian'olom-bitsy ihany. Tsy nanantena ny hahazo olona mihaotra ny 70 aho. Kanefa dia olona 150 no niatrika ny fihaonana, ary dia norakofan'ny media izany (gazety, aterineto, radio).
Inona no andrasanao amin'ity fihaonana faharoa ity?
Tiako mba ho raisina am-panajana toy ny media sosialy manana ny lanjany sy fanehoam-pirahalahiana ny blaogasifera eto an-toerana. Tiako hahalala bebe kokoa mikasika ireo fitaovan'ny media ara-tsosialy sy ny fomba fampiasana azy ireo hampitàna hafatra sy hifaneraserana amin'olona ny tontolon'ny asa fandraharahana, ireo governemanta, ary ny tsirairay mihitsy. Manantena izahay fa ny fanabeazana tsara sy marina dia hanampy antsika hanena ny fivakisana ara-niomerika eto amin'ny nosy. Amin'ity taona ity, manantena olona 170, fara-faharatsiny, handray anjara amin'ny fihaonana aho .
Ahoana no hamaritanao ny tontolon'ny blaogy eto Puerto Rico?
Mivoatra be ny tontolon'ny blaogy eto Puerto Rico. Mihaotra ny 1400 ireo blaogy voarakitra ao amin'ny rakitry ny Puerto Blogs. Ao anatin'izany ireo blaogin'ny gazety, na ireo “community platforms” (mitovy amin'ireo forums), ary, mazava ho azy, misy ireo blaogy tsy voarakitra. Mety hitombo roa avo heny ity isa ity raha isaintsika ireo blaogy sy ireo “platforms” rehetra. Raha ny resaka fahatsarana, dia misy ny toerana ho amin'ny fanatsarana. Maro ireo blaogy misahana ny teknolojia, fanabeazana, ary ny fiainana andavanandro. Tokony mbola hisy blaogy hafa amin'ireo lohahevitra hafa, ohatra mikasika ny politika sy ireo fanontaniana ara-tsosialy, ny finoana, ary ny fialamboly. Heveriko ho toy ny tontolon'ny fanehoan-kevitra matanjaka kokoa ny tontolon'ny blaogy, ary ireo mpitoraka blaogy dia mety afaka hanoratra mikasika ireo olana maro hafa amin'ny fomba matotra sy mivaingana.
Azafady ilazao ny blaogy sasantsasany tianao indrindra eto Puerto Rico .
Tiako ny blaogin'i Mario Alegre, Sin subtítulos [ES] ao amin'ny Primera Hora (gazety mahazatra eto Puerto Rico), izay tena vita tsara, na dia tsy tia sarimihetsika aza ianao. Tiako ihany koa ny Novéltica [ES] satria manana famakafakana tsara mikasika ny kolontsain'ny aterineto eto an-toerana; Prisma Digital, izay manazava ny teknolojia amin'ny fomba tsotra, ary Qiibo, blaogy izay manome rohy mankamin'ireo teknolojia , sarimihetsika, ary ireo fiainana ara-tsosialy.
Meksika 7 andro izay